How to Clone UBUNTU? — MYSTERY ZILLION
How to Clone UBUNTU?
May 2012 edited May 2012 in Ubuntu
ကျွန်တော် သွင်းထားတဲ့ Ubuntu မှာ install လုပ်ထားတဲ့ Packages တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို တစ်ခါထဲပါအောင် Image file လုပ်ပြီး နောက် စက်တစ်လုံးမှာ အဲ့ဒီ iso file နဲ့ boot တက်ပြီး ubuntu install လုပ်ရင် ကျွန်တော့် စက်ထဲမှာရှိတဲ့ applications တွေပါ တစ်ခါထဲ ပါပြီးသား ဖြစ်နေအောင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ubuntu install လုပ်ရတာ လွယ်ပေမယ့် packages တွေ သွင်းရတာ internet connection လိုတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလိုမျိုး clone ပုံစံလုပ်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ တခြားသူတွေကို share ချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။ Backup အနေနဲ့လည်း သုံးရအဆင်ပြေတာပေါ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ubuntu Restricted Extras လိုမျိုး packages တွေဆိုရင် လိုပါတယ်။ ဒေါင်းဆိုတာ 50MB လောက်ရှိတဲ့အတွက် အဆင်မပြေလှပါဘူး။ အရင်တစ်ခါ ကိုစေတန် ( @saturngod ) ပြောပြဖူးတာရှိပေမယ့် ဘယ်လိုမှ ပြန်ရှာလို့မရတော့လို့ပါ။ သိတဲ့သူရှိရင် ကူညီပါအုံးလို့!
Thanked by 1 MgAungMyoKyaw
If you only want to clone HD, it can be done with single command.
1) Plug your destination HD to computer.
2) sudo dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1
Important Notice: "if" = source, "of" = destination
If you want to create Live ISO, Remastersys can help you.
1) Install Remastersys
2) Install and Update everything on your Ubuntu system
3) sudo remastersys dist (or) GUI for Remastersys is also provided
4) Burn the result ISO to DVD or CD and you can boot as LiveCD
May 2012 edited May 2012 Moderators
Thanks You! Ko Lupyo ( @CalmHill ) .
1. Novo Builder , http://www.cyvoc.net/novoweb/screenshots.html
usplash maker for Boot Screen. I don't know it's still supporting Ubuntu 12.04
boot လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ ISO Magic နဲ့လုပ်တယ်။ အဲမှာ တစ်ခု သတိထားရမှာက Load Boot Image ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတော့ isolinux folder အောက်က isolinux.bin ကိုခေါ်ပေးရမယ်ဆိုတာပဲ။ အဲဒါက boot တက်ဖို့ အတွက်လေ။ isolinux.cfg ကတော့ desing ပေါ့။ .txt ကတော့ ကိုယ်ဖော်ပြချင်တဲ့စာတွေ အပိုင်းပေါ့။
for ubuntu package DVD
OmO. .. I was looking for that post in your blog, but I failed.
Thanks for the Link. I'm going to try that way first. ~O)
ကျွန်တော် Remastersys ကို သုံးပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် သူက liveCD ပဲပြန်ထုတ်ပေးတာ။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Ubuntu iso လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက ထုတ်လိုက်တဲ့ iso ကို Boot တက်လိုက်ရင် သာမန် ubuntu installation တွေလိုပဲ လုပ်သွားမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် စက်ထဲမှာ သွင်းထားပြီးသား packages တွေပါ ပါပြီးဖြစ်နေမယ်။ အဲ့ဒါကိုပြောတာ..
နည်းလမ်းများ ရှိသေးလား? #:-S
Edited: ကိုစေတန် Blog က Packages နည်းလမ်းကိုတော့ လောလောဆည် အသုံးပြုနေပါတယ်။
Installer လိုက်လိုချင်ရင်တော့ အကုန်လုံး Package ပြန်လုပ်ရမယ် အဲလိုလိုချင်ရင်တော့ အတော်အလုပ်ရှုပ်မယ်။ Live CD ကို Install လုပ်ချင်ရင် ubiquity ကို Terminal ကနေ Run ရင်ရပါတယ် Ubuntu Live CD မှာ Desktop ပေါ်မှာ Install ပါတယ်မဟုတ်လား Double Click နှိပ်ရုံပဲ အဲလိုထည့်လို့ချင်ရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ရှင်းပြရင်လွဲနေလိမ့်မယ် သူများရေးထားတာ ရှာပေးလိုက်တယ် ၂ ခုပဲလုပ်ရမှာပါ Desktop ပေါ်မှာ ubiquity အတွက် Launcher တစ်ခုလုပ် Gnome config တွေကို /etc/skel ထဲကိုကူးထည့် အဲဒါပါပဲ Live CD လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ပြန်ဖျက်လိုက်ပေါ့။
ကျွန်တော်မျိုး ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးမည်။ ကိုလူပျို .. ကျေးဇူး (:| ~O)